မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: 08/01/2013 - 09/01/2013
Elysium - IMAX Movie Review
၂၁၅၄ ခုႏွစ္မွာ လူအုပ္စု ၂စုပဲရွိတယ္… ၁စုက အရမ္းခ်မ္းသာလြန္းလို႔ Elysium ဆိုတဲ့ ဖန္တီးထားတဲ့ ျဂိဳလ္ေပၚမွာ သီးသန္႔ေနတဲ့ လူနည္းစုျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ လူေတြကေတာ့ လူဦးေရထူထပ္ျပီး ပ်က္စီးယိုယြင့္ေနတဲ့ ကမာၻေပၚမွာ ဆင္းဆင္းရဲရဲေနရတဲ့ လူအုပ္စုျဖစ္တယ္။ အဲဒိလူေတြကို Elysium က ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ စက္ရုပ္ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး လုပ္အားကို မတန္တဆခိုင္းတယ္။ ေဆးပညာအရမ္းေကာင္းျပီး ဘာေရာဂါကိုမဆို မိနစ္ပိုင္းအတြင္းကုႏုိင္တဲ့ Med pods ဆိုတဲ့ စက္ကို Elysium မွာ အိမ္တိုင္းပိုင္ေပမဲ့ ကမာၻေပၚက လူသားေတြအတြက္ကေတာ့ ပ်က္စီးျပီး မျပည့္စံုတဲ့ ေဆးရုံပဲရွိတဲ့အတြက္ ကမာၻက လူေတြက Elysium ကို ခိုးသြားျပီး ေဆးကုဖို႔ အျမဲအားထုတ္ေလ့ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ Elysium ရဲ႕ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး Jessica Delacourt က သူတို႔ဆီ ခ်ဥ္းကပ္လာသမွ် ယာဥ္ေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ အေျမွာက္နဲ႔ပစ္သတ္ဖို႔ Kruger ဆိုတဲ့ သူကို ခိုင္းေစခဲ့တယ္။ ထို႔သို႔ကိုင္တြယ္ပံုကို Elysium ရဲ႕ သမၼတ Patel က သေဘာမတူတဲ့အတြက္ Delacourt ဟာ သမၼတကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး သူမ အာဏာသိမ္းဖို႔အတြက္ Elysium ကို ထိမ္းခ်ဳပ္တဲ့ ကြန္ျပဴတာပရိုဂရမ္ကို Hacked တဲ့ ေနာက္ ပရိုဂရမ္တစ္ခုကို စက္ရုပ္ေတြထုတ္တဲ့ ကုမၺဏီသူေ႒း John Carlyle ကို ေစခိုင္းခဲ့တယ္။
Max ဟာ အရည္အခ်င္းရွိေသာ္လည္း သူ႔ဟာသူ ေအးေအးေဆးေဆးသာမာန္ စက္ရုံအလုပ္သမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ကမာၻေပၚမွာ ဆင္းဆင္းရဲရဲေနထိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူဟာအလုပ္လုပ္ရင္း ေရဒီယိုသတၱဳလွဳိင္းေတြထိျပီး ၅ရက္ပဲ အသက္ဆက္ရွင္ဖို႔က်န္ေတာ့တဲ့အခါ သူ႔ကို အလုပ္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ မေသခ်င္တဲ့ Max ဟာ Elysium ကို ေအာက္လမ္းနည္းနဲ႔သြားဖို႔ ေျမေအာက္အဖဲြ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ Spider နဲ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့တယ္။ အလဲအလွယ္အေနနဲ႔ Spider က သူေ႒း John Carlyle ဦးေႏွာက္ထဲက အခ်က္အလက္ေတြကို ခိုးယူခိုင္းတယ္။ သူမလုပ္ႏုိင္ေလာက္ဖူး သူမတတ္ႏုိင္ဘူးလို႔ တစ္ခ်ိန္လံုးထင္ေနတဲ့ Max ဟာ အသက္ေဘးနဲ႔ၾကံဳလာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းကို လက္ခံလိုက္တယ္။ သူတို႔၀င္လုတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ရလိုက္တာက သူေ႒းရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြမဟုတ္ပဲ။ Elysium system တစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ပရိုဂရမ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအခါ Max အတြက္ ကမာၻေပၚက လူေတြအားလံုးကို ကယ္ဖို႔ တာ၀န္က်လာျပန္ပါေတာ့တယ္…… သူတို႔ ဘယ္လိုကယ္မလဲ။ အတၱၾကီးတဲ့ လူနည္းစုကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ သူငွားထားတဲ့ လူမိုက္ Kruger ကိုဘယ္လိုတိုက္ထုတ္မလဲ။ ဖန္သားျပင္မွာ ရွဳစားေပါ့ေနာ္…
ဒီကားဟာ ဟိုးတစ်လောက ထွက်ခဲ့တဲ့ Justin Timberlake ရဲ့ In Time ဆိုတဲ့ကားနဲ့ ကျောရိုး သဘောထားချင်းတူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ သိပ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့ သိပ်ဆင်းရဲတဲ့ လူမျိုး ၁ရပ်ရဲ့ ကွာခြားပုံနဲ့ ဆင်းရဲသားတွေနှိပ်ကွပ်ခံရတဲ့ ဘ၀အခြေခံသဘောတူတာကိုပြောတာပါ။ ကျန်တာကတော့ ကွဲပါတယ်။ ဒီကားက In Time ထက် သွေးသံရဲရဲ နည်းနည်းပိုပါတယ်။ ဥပမာ မင်းသားကို ရေဒီယို သတ္တုကြွ ဓာတ်ငွေ့ထိပြီး လမ်းလျှောက်နိုင်အောင် သံ၀တ်စုံကြီးကို အသားနဲ့ပူးနေအောင် မူလီနဲ့ ရစ်တာတို့ ဘာတို့ပေါ့။ ဒီကားမှာဇာတ်လမ်းအခြေခံက သိပ်မရှိပေမဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ Action ခန်းတွေများပါတယ်။ Visual effects တွေကို ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားပါတယ်။ (ဥပမာ… လူဆိုးကြီးမျက်နှာပျက်စီးသွားတာကို ပြန်ကုတာတို့ဘာတို့ပေါ့)…
နောက်ပြီး ဒီကားမှာ ပေးချင်တဲ့စကားလေးက လူတွေဟာ လူရယ်လို့ဖြစ်လာကတည်းက ကိုယ်လုပ်မှရမဲ့ တာ၀န်ဆိုတာ ကိုယ်စီရှိလာကြတာချည်းပါပဲ။ ငါမလုပ်နိုင်လောက်ပါဘူး ငါလုပ်လို့ မဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ထင်နေပင်မဲ့ တကယ်တမ်းတော့ တချို့အလုပ်တွေက ကိုယ်လုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောလေးပြသွားတာကို သတိထားမိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်မတို့တွေမှာ ငါလုပ်လို့ဖြစ်ပါ့မလား၊ ဒါမျိုးက ငါမလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး စစ်မရောက်ခင် မျှားကုန်တတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ဘာမှ စမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ကိုယ်လုပ်ကြည့်ရင်လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ခုက လူတွေဟာ ကိုယ့်မွေးရပ်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဖို့ သူ့အဖွားဆုံးမ စကားလေးကလဲ စိတ်ထဲတစ်ခုခုတော့ စဉ်းစားစရာဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီကားဟာ တခြား နာမည်ကြီးကားတွေလောက်တော့ အသေးစိတ်စဉ်းစားရိုက်မထားဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။ Character Development မှာလဲ ဘာလိုနေမှန်းမသိ နည်းနည်းလေးလိုနေပါတယ်။ ဥပမာ Max ရပ်ကွက်ထဲမှာ သူတစ်ယောက်ပဲအလုပ်လုပ်ပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကျ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်သလိုဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ပြတဲ့ Elysium ဆိုတဲ့ နေရာကို ကျွန်မအနေနဲ့တော့ သွားနေချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ စိတ်မဖြစ်မိဘူး။ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ စင်္ကာပူလိုမျိုး တောတောင်မရှိ ဘာမရှိနဲ့။ ပရိတ်သတ်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မက အသေးစိတ်ခုလိုပြောလို့ ကပ်ပြောသလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်… ဒါပေမဲ့ အဲဒိ သေးသေးလေးတွေက ကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ် အဲဒိ ဇာတ်ကားထဲကို ဘယ်လောက် ထဲထဲ၀င်၀င် ခံစားလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် ဒီကားဟာ ပျင်းနေတယ် Sci-fi science fiction action တွေကားမျိုးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြည့်လို့ပျော်တဲ့အထဲမှာပါပင်မဲ့ အရမ်းအရမ်းကောင်းပြီး စိတ်ထဲစွဲကျန်တဲ့အထဲတော့မပါဘူး။
Spoiler ဖြစ်မှာဆိုးလို့ မပြောလိုပေမဲ့ ခုတော့ ပြောလိုက်အုံးမယ် ဇာတ်သိမ်းကို သိပ်သဘောမကျဘူး။ မင်းသားက Radiation ထိတာတောင် ဒီလောက် ဖိုက်လာနိုင်ပြီးမှ data transfer လုပ်ရင် သူသေမယ်ဆိုတဲ့ concept က ဘယ်ကရောက်လာတာလဲ။ data transfer ရုံပဲဟာ။ ပြီးတာနဲ့ ဟို Med-pods ပေါ်တင်ပြီး ကုလိုက်ပေါ့။ မျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးဗုံးကြောင့်ပေါက်သွားတဲ့လူဆိုးကျတော့ ဦးနှောက်မပျက်စီးလို့ဆိုပြီး ပြန်ကယ်လို့ရတယ်။ ဦးနှောက်မပျက်စီးပေမဲ့ လူသေပြီး ဘယ်နှမိနစ်နေရင်လဲမသိဘူး ဦးနှောက်လဲသေသွားတာပဲဟာ။ ပြီးတော့ အတွေးတန်းလန်းဖြစ်စေတာက Elysium ရဲ့ system ကို reboot ပြန်ချပြီး ကမ္ဘာက လူတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့ system ကို သွင်းလိုက်တယ်။ ဒါဆို သမ္မတက အသစ်က ဘယ်သူဖြစ်မှာလဲ။ Spider လား။ ဒါပေမဲ့ Spider ကလဲ အရင်က ပိုက်ဆံရရင် အကုန်လုပ်တဲ့ ကောင်ပဲ။ သိပ်ကောင်းတဲ့ လူမှမဟုတ်တာ။ သူအာဏာရသွားတော့ရော တစ်ချိန် အာဏာရှင်ဖြစ်ပြီး Elysium က လူတွေလိုပဲ ကိုယ့်အကျိုးအတွက် အများကို မနှိမ်တော့ဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ဇာတ်လမ်းက ကမ္ဘာက လူတွေအတွက် ဆေးပညာအကူတွေရောက်လာတယ် ဒုက္ခလွတ်သွားတယ်ပြပေမဲ့ ကျွန်မရင်ထဲတော့ ခုလို တန်းလန်းကျန်နေတဲ့ မရှင်းမရှင်းတွေကို ကျေနပ်မှုမပေးခဲ့ဘူး…
ဒီကားကို မဗေဒါက IMAX နဲ့ ကြည့်တာပါ။ IMAX ကိုပထမဆုံးစပြီး ကြည့်ဖူးတာပါ။ IMAX ဆိုတာ တကယ်တော့ ပိုကြီးတဲ့ ဖန်သားပြင်နဲ့ ပိုကြည်တဲ့ ရုပ်ပုံကို အကြီးကြီးမြင်ရတာပါ။ 3D လို မျက်မှန်တွေဘာတွေ တပ်ကြည့်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကားအစပိုင်းမှာ မင်းသားလမ်းလျှောက်လာတဲ့ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တစ်လျှောက် ကင်မရာကို hand held ရိုက်ကွက်မျိုးနဲ့ရိုက်ထားတော့ screen အကြီးကြီးကို အနီးကပ်မြင်ရသလိုဖြစ်ပြီး လူက မူးချင်သလိုတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် အခန်းတွေမှာတော့ မမူးပါဘူး။ နောက်ဆုံးခန်း ကမ္ဘာပေါ်ကို ဆေးကူ ယာဉ်ကြီးဆိုက်ပြီး ယာဉ်နောက်ဖုံးတံခါးကြီးပွင့်တဲ့အခန်းမှာတော့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ပွင့်လာသလို တကယ်ခံစားရပါတယ်။ ဒီတော့ IMAX က တစ်ချို့ အခန်းတွေလောက်အတွက်ပဲ ကြည့်ကောင်းပြီး တော်တော်များများအခန်းတွေကတော့ သာမာန် ရုပ်ရှင်ရုံထက် Screen ပိုကြီးတာကလွဲလို့ ဘာမှ မကွာပါဘူး။ ကင်မရာတုန်ရင် ပိုလို့တောင် ခေါင်းမူးပါသေးတယ်။ မဗေဒါကတော့ ခေတ်အောက်တယ်ပဲပြောပြော 3D ရော၊ IMAX ရောကို ရိုးရိုး cinema လောက် မကြိုက်ပါဘူး… IMAX က ပေးရတော့ ရိုးရိုးထက် ၂ဆပိုပေးရပြီး ၂ဆ ထူးကဲမကောင်းဘူးလို့ပဲ ခံစားရပါတယ်…
Posted by mabaydar at 3:09 PM 8 comments :
Time for World Heritage Site: Greater Blue Mountains - Day 6
မွတ္မွတ္ရရ အဲဒိေန႔က ၂၀၁၃ရဲ႕ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ေပါ့ရွင္။ ၾသစီေရာက္ၿပီးမွ Blue Mountain ကို မသြားခဲ့ရဘူးဆိုရင္ ၾသစီေရာက္ရက်ိဳး ဘယ္နပ္ေတာ့မလဲေနာ္။ ေရွ႕ပိုစ့္မွာေရးခဲ့တဲ့အတိုင္းပါပဲ Blue Mountain သြားဖို႔အတြက္ တိုးပက္ေက့ရွ္ေတြ ၀ယ္ဖို႔ အခ်ိန္မမွီေတာ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္မရွာခဲ့တဲ့ research အတိုင္းပဲ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ရထားစီးသြားဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြန္မက အဲဒိလိုပဲ သြားခ်င္ခဲ့တဲ့အတြက္ စိတ္ထဲေတာ့ ႀကိတ္ၿပီး ၀မ္းသာမိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္သြားလို႔ တစ္ခုခုအဆင္မေျပခဲ့ရင္ အစ္မေျပာတာခံရမွာစိုးလို႔သာ တိုးနဲ႔သြားခ်င္လဲသြားလို႔ သေဘာတူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ ၈နာရီေလာက္မွာ ကၽြန္မတို႔ ညီအစ္မ ၂ေယာက္နဲ႔ သႏၲာနဲ႔ ေဟာ္တယ္ကထြက္လာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာေတာင္ထဲသြားမွာမို႔ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမယ္ထင္တဲ့အက်ႌရယ္ ဖိနပ္ရယ္ပဲ ေ႐ြး၀တ္ခဲ့ပါတယ္။ အင္တာနက္မွာရွာတုန္းက အေႏြးထည္ယူဖို႔ပါေျပာတဲ့အတြက္ အေႏြးထည္ပါယူလာပါတယ္။ သႏၲာကေတာ့ အလုပ္သြားရမွာမို႔ မလိုက္ျဖစ္ေတာ့ပါ။
ဘာေၾကာင့္ Blue Mountain လို႔ေခၚတာလဲ
Blue Mountain ကိုသြားတဲ့အေၾကာင္းေလးေရးမယ္ဆိုေတာ့ Blue Mountain အေၾကာင္းေလးရွာေဖြမိတယ္... အေဝးကေနၾကည့္ရင္ ေတာေတာင္တစ္ခုလုံးကို အျပာေရာင္အခိုးအေငြ႕ေတြကာထားသလို (အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတု ပူတဲ့အခါမွာ ပိုမိုသိသာစြာျမင္ရတတ္တယ္) ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ Blue Mountain လို႔ေခၚတယ္... ရာသီဥတုပူလာတဲ့အခါ Blue Mountain ေပၚမွာ အမ်ားဆုံး ေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ Eucalyptus အမ်ိဳးအစားအပင္ေတြရဲ႕ အဆီက အေငြ႕ျပန္ၿပီး ေနေရာင္ထဲမွာပါတဲ့ အျပာေရာင္ကို တျခားအေရာင္ေတြထက္ ပိုမိုအားေကာင္းေစတယ္... Blue Mountain ထဲမွာ ရွားပါးတိရိစၧာန္အမ်ိဳးေတြအပါအ၀င္ တိရိစၧာန္ အမ်ိဳးေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ေနထိုင္ၾကတယ္...
၂၉ရက္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွာ Blue Mountain ကို ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ ေနရာတစ္ခုအေနနဲ႔ (World Heritage Area) အျဖစ္ စာရင္းသြင္းသတ္မွတ္ခံခဲ့ရတယ္...
မေဗဒါ မမွားဘူးဆိုရင္ Eucalyptus အပင္ဆိုတာ ဒီအပင္မ်ိဳးေတြကို ေျပာတာထင္ပါတယ္...
က်န္းမာေရးေကာင္းတုန္း... ၀င္ေငြေလးအဆင္ေျပတုန္း... အေျခအေနေလးေပးတုန္း ခရီးသြားထားဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္...
Day6စတင္ျခင္း.
ကၽြန္မတို႔ အားလုံး ေဟာ္တယ္ကေနထြက္လာၾကၿပီး ဘူတာ႐ုံသြားဖို႔လမ္းမွာ Pie Face ဆိုင္ေလးကို ထပ္ေတြ႕တာနဲ႔ ေအာ္စီမွာ ေနရာတကာေတြ႕တဲ့ဆိုင္ေလး စားဖူးတယ္ရွိေအာင္ ၀င္စားမယ္ဆိုၿပီး အဲဒိမွာ မနက္စာစားဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဆိုင္ထဲမွာ ကုလားတစ္ေကာင္နဲ႔ တ႐ုတ္တစ္ေကာင္အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ကေတာ့ အသစ္ထင္ပါတယ္။ ကုလားကေတာ့ ဆရာလုပ္ေနတာေပါ့။ ကၽြန္မ မုန္႔မွာၿပီးေတာ့ ေသာက္ဖို႔အတြက္ Cappuccino မွာပါတယ္။ ကုလားက မုန္႔မွာေနကတည္းက အခ်ိဳးမေျပတာပါ။ ေသာက္စရာမွာေတာ့ သူ႕ဆိုင္လဲလူသိပ္မ်ားေနတာမွ မဟုတ္တာ။ ကိုယ္လဲစဥ္းစားမွာေပါ့။ သူက စိတ္မရွည္တဲ့႐ုပ္နဲ႔မို႔ ကိုယ္က ဘာေသာက္စရာရွိလဲေမးေတာ့လဲ စိတ္မရွည္တဲ့ေလသံနဲ႔ ျပန္ေျဖတယ္။ စာတမ္းေရးထားတာကိုလွမ္း ျပတယ္။ ေရးထားတာေတာင္ ကၽြန္မက သူ႕ကိုဘာလို႔ေမးေသးလဲဆိုတဲ့ပုံနဲ႔။ အဲဒါ Cappuccino လဲမွာလိုက္ေရာ။ သၾကားဘယ္ေလာက္ထည့္မွာလဲတဲ့။ ကၽြန္မကလဲ နည္းနည္းေၾကာင္သြားၿပီး နင္တို႔ထည့္ေနက်အတိုင္း ပုံမွန္ထည့္လို႔ေျဖလိုက္တယ္။ ဒါကို ကုလားက နင္ထည့္ခ်င္သေလာက္ေျပာရမယ္တဲ့။ ပုံမွန္ဆိုတာ မရွိဘူးဆိုၿပီး သူ႕လုပ္စားထိုင္စားေနရတဲ့႐ုပ္နဲ႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္မကလဲ အဲဒိေန႔ကမွ ဘယ္လိုေၾကာင္ေနလဲမသိဘူး။ ဦးေႏွာက္က မနက္မို႔ အလုပ္ျမန္ျမန္မလုပ္ေသးတာလားမသိဘူး။ ဒီေတာ့ စကၤာပူက Bubble tea ဆိုင္ေတြကလိုပဲ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေျပာဖို႔ပဲ သတိသြားရတယ္။ ဒါနဲ႔ သူ႕ကို ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒါကို သူ႐ုပ္က ကၽြန္မကိုပဲ ဒုံးေဝးလွခ်ည့္ရဲ႕ဆိုၿပီး စိတ္ပ်က္တဲ့ပုံနဲ႔။ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီးျပန္ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မကလဲ Mac Donald က ေပးသလိုမ်ိဳး သၾကားအိတ္ေလးေတြနဲ႔ေပးသလားဆိုၿပီး ဘယ္ႏွအိတ္ယူမယ္ေျပာတယ္။ ဒါကိုလဲ သူက မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ႔ကၽြန္မကလဲ စိတ္တိုလာၿပီး။ ဒါဆို နင္တို႔က သၾကားကိုဘာနဲ႔တိုင္းလဲ ငါ့ကိုေျပာေပါ့။ ၁ထုတ္၊ ၂ထုတ္လဲမဟုတ္၊ ရာခိုင္ႏႈန္းလဲမဟုတ္ရင္ နင္ဘာနဲ႔တိုင္းလဲေျပာမွ ငါျပန္ေျဖလို႔ရမွာေပါ့ဆိုေတာ့ ဒင္းက ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းက သၾကားကို လက္ဘက္ရည္ဇြန္းနဲ႔တိုင္းတယ္တဲ့။ နင္မသိဘူးလားတဲ့။ အခြက္ေရာ ေလသံေရာက လုံး၀အခ်ိဳးမေျပစြာနဲ႔ျပန္ေျပာတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္ လဘက္ရည္ဇြန္းနဲ႔ တိုင္းတာ ကၽြန္မလဲ ေမ့ေနတာပါ။ စကၤာပူမွာေတာ့ ပုံမွန္အားျဖင့္ အေပၚက ကၽြန္မေျပာခဲ့သလိုပဲ တိုင္းတာပဲ။ လူက Tea spoon နဲ႔တိုင္းတာကို ကိုယ္ေမ့တာကိုလဲ စိတ္တို။ အဲဒိကုလား ၾသစီမွာ ဖင္ေခါင္းက်ယ္ေနတာကိုလဲ ပိုစိတ္တို။ ကာစတန္မာကို အဲလိုဆက္ဆံလို႔လဲစိတ္တို။ သူမ်ားႏိုင္ငံဆိုေတာ့လဲ သိပ္ေတာ့ရန္မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မနည္းျပန္ထိန္းရတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ အဲဒိေန႔က ခ်စ္သူမ်ားေန႔ရယ္ေပါ့။ ၂၀၁၃ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မနက္မွာ ၾသစီက Pie ကုလားနဲ႔ ရန္ျဖစ္ရင္း ေန႔ကို စခဲ့ရေလတယ္…။
သူငယ်ချင်း သန္တာနဲ့ Pie Face မှာ အမှတ်တရ...
Blue Mountain ကို ဘယ်လိုသွားမလဲ
ဒီလိုင်းစီးရတာမဟုတ်ပါဘူး... blacktown ဆိုတဲ့နာမည်က စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးခံစားရလို့ (စုန်းနိုင်ငံလိုလို) ရိုက်လာတာ...
စားသောက်ပြီးမှ Town Hall station ကို လမ်းလျှောက်သွားကြပြီး ကျွန်မတို့ ညီအစ်မ ၂ယောက်က Blue Mountain ExplorerLink Tickets ကို ၀ယ်တယ်။ သန္တာကတော့ သူပြန်ဖို့ လက်မှတ်၀ယ်တယ်။ Blue Mountain ExplorerLink Tickets ဆိုတာက City Rail ကပြေးဆွဲတဲ့ Blue Mountain လိုင်းက မှတ်တိုင် Katoomba မှတ်တိုင်အထိ အသွားအပြန် စီးလို့ရပြီး ဟိုရောက်ရင်လဲ Blue Mountain ရဲ့ Tourist Attraction တွေကို ပတ်ပို့ပေးတဲ့ Explorer Bus ကို ကြိုက်သလောက်စီးလို့ရတယ်တဲ့။ အဲဒိလက်မှတ်က သြစီဒေါ်လာ ၅၀ ကျပါတယ်။ Blue Mountaing Line ကို စစီးဖို့အတွက် Central Railway Station ကိုသွားရပါမယ်။
အဲဒိဘူတာရုံမှာ ပလက်ဖောင်းစုစုပေါင်း ၂၅ခုရှိပါတယ်… ဒီတော့ ကိုယ်သွားမဲ့ပလက်ဖောင်းကို မှန်အောင်ရှာဖို့လိုပါတယ်… ဘူတာရုံက ဟယ်ရီပေါ်တာထဲက ဟက်ဝေါ့တက္ကသိုလ်သွားတဲ့ ဘူတာရုံနဲ့တူနေပြီး ကိုယ်သွားရမဲ့ ပလက်ဖောင်းကို ပထမ ရှာမတွေ့သေးတော့ တိုင်ပဲပြေးစောင့်ရမလို လုပ်ကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်မိတယ်… ဒါပေမဲ့ နံပါတ်စဉ်အတိုင်း စိတ်ရှည်ရှည်လျှောက်ရင်တော့ တွေ့ပါတယ်… ရထားကြီးစိုက်ထားတာတွေ့ပေမဲ့ စောပါသေးတယ်ဒီရထားက ငါတို့စီးရမဲ့ရထားမဟုတ်လောက်သေးဘူးဆိုပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြပါသေးတယ်… နောက်တော့ ပလက်ဖောင်းမှာလဲ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး အချိန်လဲနီးလာလို့ အဲဒိက တာ၀န်ရှိသူကိုမေးကြည့်တောမှ ဒီရထားက Blue Mountain ကိုသွားတဲ့ရထားဟုတ်ပါတယ်တဲ့… ရထားပေါ်မှာ လူတွေတောင် အတော်ရောက်နေလို့ နေရာတောင် မနည်းရှာလိုက်ပါတယ်… ရထားနဲ့သွားတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ မြို့ငယ်လေးတွေ… ခြံ၀န်းလေးနဲ့ လုံးချင်းတိုက်လေးတွေကို တွေ့ရပါတယ်… မြို့ပြင်ပိုင်းကျမှ အဖြူတွေနေတာပိုမြင်ရသလိုခံစားရပါတယ်.. ဆစ်ဒနီမြို့ထဲမှာတုန်းက ကုလားနဲ့ Asian တွေကတောင် ပိုများနေသလိုပါပဲ… မြို့လေးတွေကိုဖြတ်ပြီး တောတောင်တွေ ထဲကနေ ရထားကြီးဖြတ်မောင်းတော့ မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းတွေက အဆန်းတွေဖြစ်နေပါတယ်… တစ်ခါတစ်ခါ ရေတံခွန်လေးခဏပေါ်လာလိုက် စမ်းချောင်းလေးပေါ်လာလိုက်နဲ့ ဓာတ်ပုံတောင် ရိုက်ဖို့ မမှီပါဘူး… ကျွန်မအစ်မကတော့ ဘေးမှာ အိပ်မောကျနေလေရဲ့… ကျွန်မကတော့ ရထားစီးရတာပျော်နေတာ…၁နာရီခွဲလောက် စီးပြီးမှ ဆင်းရမဲ့ Katoomba ဘူတာကိုရောက်ပါတယ်… ဆင်လိုက်တာနဲ့ ထိတွေ့လိုက်ရတဲ့လေးက တောတောင် အငွေ့အသက်နဲ့ စိမ့်အေးပြီး လူကို လန်းသွားစေပါတယ်… ဘူတာရုံလေးတွေကလဲ မြို့ထဲက ဘူတာရုံတွေနဲ့ မတူပါဘူး… လက်မှတ်ထည့်ပြီး ဖြတ်၀င်ရတဲ့ နေရာလဲမရှိပါဘူး… ကြည့်ရတာ အဲဒိကနေ အလကားတက်စီးလို့ရတယ်ထင်တယ်… ဟုတ်တယ်လေ ဘာအတားအစီးမှမရှိ… လက်မှတ်စစ်လဲမရှိမှတော့ အလကားတက်စီးလို့ရတာပေါ့… (ဒါပေမဲ့ မြို့ထဲသွားမဲ့လူကျတော့ အပြင်ဘယ်လိုပြန်ထွက်မလဲ လက်မှတ်မှ မပါတာ… ခုထက်ထိ အဖြေမသိသေးပါဘူး)… ဘူတာကထွက်တာနဲ့ အပြင်တန်းရောက်ပြီး ညာဘက်က အဆောက်အအုံးထဲမှာ မြို့ထဲက ၀ယ်လာတဲ့ လက်မှတ်ကိုပြပြီး အဲဒိမှာ မြေပုံရယ် ကားလက်မှတ်ရယ် ထုတ်ယူပါတယ်… အဲဒိမှာ အမတ်ဆုံး ဟိုးအောက်ထိဆင်းတဲ့ ရထားစီးချင်တာ… ခု under maintenance မို့ စီးလို့မရပါဘူးတဲ့… ဒါနဲ့ Sky train/cable car လက်မှတ်ပဲ ၀ယ်ဖြစ်ပါတယ်… $24.00 ကျပါတယ်… အဲဒါကိုတော့ Cash က နည်းနေပြီမို့ Master card နဲ့ပဲရှင်းဖြစ်ခဲ့တယ်… Blue Mountain Explorer Bus နဲ့ ရထားလက်မှတ်အသွားအပြန် Package က $49.95 + ခု sky train က $24.00 ဆိုတော့ စုစုပေါင်း $79.95 ပဲကျပါသေးတယ်… တိုးပတ်ကေ့ကတော့ AUD 150 လောက်ရှိပြီး… နေ့လည်စာရယ် နောက်တော့ wildlife ပန်းခြံတစ်ခုရယ်ပါပါတယ်… သူတို့ပေးတာနဲ့ တွက်ကြည့်ရင်တော့ နီးစပ်ပေမဲ့… ကျွန်မရဲ့ အကြိုက် ရထားလဲမစီးရ… ပြီးတော့ ဘာလုပ်လုပ် အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ ကလေးတွေလိုပဲ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ သူတို့ပို့တဲ့နေရာလေးပဲ လိုက်ရတာကို မကြိုက်တာပါ… ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သွားတာ့ တိုးနဲ့သွားတာလောက် အဆင်ပြေချင်မှပြေမယ်… သက်တောင့်သက်တာရှိချင်မှရှိမယ်… ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေချာမသိတာကို ရင်ခုန်ရတာက အရသာမို့လား… နောက်တစ်ခုက ကိုယ်ကိုတိုင် ကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ် ဘယ်သွားနေတယ်ဆိုတာကို သေသေချာချာသိတယ်… သူငယ်ချင်းတွေပြန်မေးရင်လဲ ပြောပြနိုင်တယ်…
Arriving to Katoomba
Katoomba ဘူတာက ထွက်လိုက်ရင် Hop on Hop off bus လက်မှတ်၀င်လဲရတဲ့ နေရာ...
လက်မှတ်လဲပေးတဲ့မိန်းမကြီးက တော်တော်လေးသဘောကောင်းပြီး ဖော်ရွေတဲ့ အဖြူအန်တီကြီးပေါ့… မြန်မာနိုင်ငံကလာတာဆိုတော့လဲ (ဒီကစလုံးတစ်ချို့လို အထင်သေးတဲ့ပုံမျိုးမပြတဲ့အပြင်) အိုး… ဟုတ်လား… မြန်မာနိုင်ငံကို သိတယ်… ဆိုပြီးတောင် မြန်မာပြည်အကြောင်းစကားပြောဖြစ်သေးတယ်… နောက် လူတွေအရမ်းများလာတော့လဲ ကျွန်မတို့ကို ဦးစားပေးပြီးလုပ်ပေးတယ်… ဘတ်စ်ကားစီးရမဲ့နေရာရှာမတွေ့လို့ သူ့ဆီထပ်သွားတော့ သူလူတွေများနေတာတောင် မျက်နှာတစ်ချက်မပျက်ပဲ သေချာပြန်ပြောပြတယ်… အဲဒိတော့ ကျွန်မတို့လို သူတို့နိုင်ငံသွားလည်တဲ့ ခရီးသွားတွေအတွက် သြစတေးလျကလူတွေ သိပ်သဘောကောင်းတာပဲလို့ ခြုံငုံ သုံးသပ်မိသွားတာပေါ့… အဲဒါကိုပြောတာ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ဆက်ဆံနေတဲ့ ခုလို လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေက ကိုယ့်နိုင်ငံကို အများကြီးကိုယ်စားပြုတယ်…
ကားစီးရမဲ့ နေရာကို သွားတဲ့လမ်းမှာ ထိုင်းထမင်းဆိုင်လေးတွေ့ခဲ့လို့ စားချင်ခဲ့တယ်… ဒါပေမဲ့ မဖွင့်သေးတာရော ကားလွတ်သွားမှာကြောက်တာရောကြောင့် ဘာမှ မစားပဲ ကားဂိတ်မှာစောင့်နေလိုက်တယ်… အာခြောက်ပြီး ချောင်းဆိုးမှာစိုးလို့ ရေတော့ ပြေး၀ယ်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်… ကားရောက်လာတော့ ကားသမား အဖြူအဖိုးကြီးက ကားပေါ်တက်လာသမျှ လူတွေကို ဘယ်နိုင်ငံကလာတာလဲလို့ မေးပြီး သူ့စာအုပ်လေးထဲ ရေးမှတ်နေတာတွေ့တယ်… ကားက ၂ထပ်ကားဆိုတော့ အပေါ်ထပ်မှာ ထိုင်ဖြစ်တယ်… ကားထွက်တော့ ကားသမားကြီးက မိုက်နဲ့ ဟိုရှင်းဒီရှင်းလုပ်ရင်း ကားပေါ်မှာပါလာသမျှ တိုးရစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ နှုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံနဲ့ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်တယ်… မြန်မာနှုတ်ဆက်ပုံကို သူသိပါ့မလားလို့တွေးမိတယ်… And we have friends from Myanmar “ Min galar par” ဆိုပြီး သူနှုတ်ဆက်သွားတော့ သဘောကျပြီး ပြုံးမိသလို… အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ ပါလာသမျှ နိုင်ငံကလူတွေနှုတ်ဆက်ပုံကို သူပြောနိုင်တာကို ချီးကျူးမိတယ်… သူ့မှာအစကတည်းက စုစည်းထားတာရှိကောင်းရှိမယ်… ဒါပေမဲ့ ကားလဲမောင်းရင်း သူဘယ်လိုဘယ်အချိန်မှာ ပြန်ရှာလိုက်တာလဲ… ဒါမှမဟုတ် အားလုံးကိုပဲ သူတကယ်သိနေတာလား… ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ချီးကျူးထိုက်ပါတယ်…
တောလမ်းလျှောက်မယ်ဆို မြေပုံကြည့်ပြီး သေချာ Plan ပါတဲ့... မြေပုံတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လာတယ်... ပြီးတော့ Plan ကျမလုပ်မိဘူး...
ကားထွက်ပြီးသိပ်မကြာပါဘူး ခြံလေးတွေနဲ့တိုက်လေးတွေကိုဖြတ် တောင်ကုန်းလေးဆင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ stop no.9Scenic Skyway ကို ရောက်ပါတယ်… Sky way ပေါ်ကနေကြည့်ရင် နာမည်ကျော်3sisters လို့ခေါ်တဲ့ သြစတေးလျကိုယ်စားပြု ကျောက်ဆောင်ကြီး ၃ခုကို လှလှပပမြင်ရပါတယ်… Sky way ရဲ့ အလယ်မှာ ဖန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာရှိတဲ့အတွက် အောက်က တောထဲကို ထိုးဖောက်ပြီး မြင်ရစေပါတယ်… အသွားတုန်းက Scenic Sky wayပေါ်မှာ အနောက်တိုင်းသားအချို့နဲ့ ဂျပန်နည်းနည်းပဲပါတော့ သွားရလာရတာ အဆင်ပြေပါတယ်… အရမ်းလဲမကျပ်ပဲ အနှောင့်အယှက်လဲသိပ်မဖြစ်ပါဘူး… ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပါပဲ… Sky way လမ်းဆုံးရောက်တော့ တစ်ခါ ထပ်ပြီး Cable car စီးဖို့နေရာကိုရောက်ပါတယ်… သြစတေးလျမှာ အမတ်ဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံး Cable car ဖြစ်ပါတယ်… Cable car က Skyway စီးရတာနဲ့ပုံစံမတူပါဘူး… သူက ရုပ်ရှင်ရုံလို လှေကားထစ်ပုံစံယာဉ်ပါ… အဲဒိမှာ Cable car ထပ်စောင့်ရင်းပဲ ချစ်လှစွာသော Asia Disgraced ပြည်ကြီးတရုတ်များနဲ့တွေ့ပါတော့တယ်… သူတို့အနီးအနားမှာရှိပြီဆို သင်မအေးချမ်းတော့ဘူးသာမှတ်… သင့်ဘာသာသင် အေးအေးနေလဲ သူတို့ကလာပတ်သတ်နေမှာပါပဲ… ကျော်တက်ကြ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်စကားတွေပြောပြီး လူနားအသေကပ်… သူတို့ပါလာတဲ့ကလေးတွေကိုသုံးပြီး ကြားဖြတ်ကြ (အစက ကိုယ့်နောက်မှာ ပြီးတော့ ကလေးကို အရင်အရှေ့ကို ခိုးချောင်ခိုးဝှက်သွားခိုင်းတယ်.. ပြီးရင် အဲကလေး လိုက်ခေါ်သလိုလိုနဲ့ သူတို့ ပါရှေ့၀င်လိုက်ရော… ၁ခါရပါတယ်လေလို့ စိတ်ထားလိုက်ရင်တောင် နောက်ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်လာရင် သင်ဘယ်တော့မှ Cablecar ပေါ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး… တစ်ခုခုကြည့်စရာရှိလာရင်လဲ တိုးဝှေ့ပြီး သူတို့မှ သူတို့ပဲ… အသက်ကြီးတဲ့ အဖွားကြီးတွေကလဲ အသက်ကြီးတဲ့အလျှောက်… လူကြီးမို့အလျော့ပေးလို့မရဘူး… ပေးလိုက်တာနဲ့ တစ်မိသားစုလုံးရှေ့ရောက်သွားရော… မဗေဒါ အစ်မဆိုစိတ်တွေတိုရော… မဗေဒါကတော့ ဟောင်ကောင်မှာကတည်းကအတော်လေးကို သင်ခန်းစာရထားတော့ သူတို့ကြောင့် ကိုယ့် စိတ်အညစ်မခံနိုင်ဘူး… အင်း… ဒါပေမဲ့ ကျော်တက်မယ်တော့မကြံနဲ့ လွယ်လာတဲ့ ကင်မရာကျောပိုးအိတ်က ကင်မရာဒေါက်တံစာမိမယ်… အဆင်းမှာတော့ ကျွန်မတို့လဲ ဘယ်နေရာက ကောင်းမှန်းမသေချာတာရော သူတို့နဲ့ပြိုင်မလုချင်တာရောကြောင့် နေရာကောင်းမရလိုက်ပါဘူး… တော်ရုံတန်ရုံလဲ သိပ်မမြင်ရလိုက်ပါဘူး… စိတ်ထဲတော့ ကသိကအောင့်ဖြစ်မိပါတယ်… Cable car ပေါ်ကနေ Katoomba Fall (ရေတံခွန်) ပေါ်ကနေလဲ ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့အတွက် ရေတံခွန်ကိုလဲ အပေါ်စီးကနေမြင်ရပါတယ်… ရေတံခွန်နားမှာ ရေဆော့နေတဲ့သူတွေကိုလဲ သေးသေးလေးမြင်ရပါတယ် ...
Cable car အဆုံးမှာ Jurassic တောထဲကို ပတ်ဖောက်ထားတဲ့ Scenic Walkway ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ပါတယ်… ယခင်က ကျောက်မီးသွေးမိုင်းကျင်းလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီး သဘာ၀ကိုမထိခိုက်စေပဲ တောထဲကို သစ်သားပတ်လမ်းလေးလုပ်ထားပါတယ်။ ပတ်လမ်းက ၂.၄ ကီလိုမီတာ ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်… အဲဒိလမ်းကတော့ ၁၀မိနစ်လျှောက်စာပါပဲ... (မိနစ် ၃၀လမ်းလျှောက်မလား ၁၀မိနစ်လမ်းလျှောက်မလား ၂မျိုးရွေးလို့ရပါတယ်... ဒါပေမဲ့ မဗေဒါမသိခဲ့တာက မိနစ်၃၀လမ်းက ရေတံခွန်ဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာပါ) ၁၀မိနစ် လမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲ အပင်စိတ်၀င်စားသူတွေအတွက်တော့ အမျိုးစုံလင်လှတဲ့ အပင်တွေကိုလေ့လာနိုင်ပြီး၊ သမိုင်းစိတ်၀င်စားသူတွေကတော့ အရင်ခေတ်က ကျောက်မီးသွေးတွင်းအသုံးအဆောင်တွေ ပြန်လည်တူးဖော်တွေ့ရှိသမျှကို ယခင်ပုံစံအတိုင်း ထားထားပြီး သမိုင်းကြောင်း ရှင်းလင်းချက်လေးတွေဘေးကရေးထားပါတယ်… မဗေဒါက တောရိပ်တောင်ရိပ်ကိုခံစားပြီး အပင်တွေအကြောင်းထက် အရင်တုန်းကလူတွေအကြောင်းကို ပိုစိတ်၀င်စားမိပါတယ်… တောလမ်းစစ်စစ်မဟုတ်ပဲ သစ်သားပတ်လမ်းပုံမျိုးမို့ သိပ်တော့ သဘောမတွေ့လှပါဘူး… တောထဲမို့ ဓာတ်ပုံကလဲ ဘယ်နေရာရိုက်ရိုက် ရှုခင်းတူတူပါပဲ… ကိုယ်ကလဲ ဓာတ်ပုံဆရာစစ်စစ်မဟုတ်တာတစ်ကြောင်း အချိန်သိပ်မရတာတစ်ကြောင်းကြောင့် ဓာတ်ပုံ ၁ပုံ ၂ပုံလောက်ပဲရိုက်ဖြစ်ပါတယ်…
Scenic Broadway 10 mins walk...
အဲဒိမှာလမ်းလျှောက်ပြီး အပြန် Cable car နဲ့ ပြန်တက်ဖို့ စောင့်နေခိုက်မှာလဲ သူတို့အပြုအမူရိုင်းစိုင်းတယ်ဆိုတာကိုပင် သူတို့ကိုသူတို့မသိရှာတဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ်များနဲ့ ထပ်ရင်ဆိုင်ရပြန်ပါတယ်… Cable car စောင့်တဲ့နေရာကို ကျွန်မတို့ညီအစ်မနဲ့အတူ အဖြူကောင်လေး ၂ယောက်တူတူရောက်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ သူတို့က ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာပဲရပ်နေပါတယ်… ကျွန်မတို့ ၂ယောက်ကတော့ မျဉ်းဝါလိုင်းရဲ့နောက်တည့်တည့်မှာရပ်ပါတယ်… ရှေ့မှာလူတစ်ယောက်စာလောက် နေရာလွတ်ပေမဲ့ အန္တရာယ်ရှိသည်ဆိုတဲ့ စာတမ်းကြီး ကြောင့် မျဉ်းဝါနောက်မှာပဲရပ်တာပါ… ခဏကြာတော့ ပြည်ကြီးတရုတ်တွေရောက်လာပြီး တန်းစီနေမှန်းသိရက်နဲ့လား (တကယ်ပဲမသိတာလား) တော့မသိဘူး ကျွန်မတို့ရှေ့က လွတ်နေတဲ့နေရာကို ၀င်ရပ်တဲ့အပြင် တန်းစီတဲ့လိုင်းပါ မရှိတော့ပါဘူး… ဘေးတွေကနေ ၀င်တိုးပြီး Cable car တောင်မလာသေးဘူး အဲဒိနေရာမှာ ပြွတ်ညပ်နေတော့တာပါပဲ… ကျွန်မအစ်မကတော့ သူပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီးလာတာ သူလဲ ရထိုက်တယ် အဲဒိပြည်ကြီးတွေနဲ့ယှဉ်ပြီး ရအောင် တိုးမှာပဲဆိုပြီး စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန် ခပ်လှမ်းလှမ်းက တန်းမစီပဲ အဝေးမှာပဲရပ်နေတဲ့ အဖြူကောင်လေး ၂ယောက်ကတော့ အေးချမ်းနေလေရဲ့… အဲဒိမှာ ကျွန်မစဉ်းစာမိတယ်… ဘယ် logic ကမှန်သလဲလို့… ကျွန်မအစ်မပြောတဲ့ ကိုယ်က ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး အချိန်ပေးလာရတာ သူတို့ကိုအလျော့ပေးနေရမယ်ဆိုရင် အလကားဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုတာလဲ သူ့ logic နဲ့ မှန်တယ်… ဒါပေမဲ့ အဲဒိလို အဆင့်မရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အော့ကျောလန်လူမျိုးတွေနဲ့ ပြိုင်ဖြစ်ပြီး တစ်နေကုန် ကိုယ့်စိတ်ညစ်ညမ်းပြီး မနေပဲ… ကိုယ့်အချိန်လေးနဲ့ကိုယ် ရသလောက်လေ ခံစားပြီးအေးဆေးနေမယ်… သိပ်လုပ်ချင်နေတဲ့သူတွေကို ပေးလုပ်လိုက်တာကောင်းမလား… (ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့က ဒီကို နောက်တစ်ခေါက်လာဖြစ် မလာဖြစ် အခြေအနေအခွင့်အလန်း ပေးဖို့ မသေချာဘူး… ဟိုအဖြူကောင်တွေက ဖြစ်နိုင်သေးတယ်)… ပြီးတော့ ကိုယ်လဲ လူအုပ်ထဲရောက်နေပြီ… ပြန်ထွက်လို့လဲမရဘူး… အဆင့်မရှိတဲ့လူတွေကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ဘူးကွာဆိုပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး စိမ်ခေါ်ထားတယ်… အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားသားတွေရေးတဲ့ ခရီးသွားပိုစ့်တွေမှာ Tourist route ကနေထွက်ပြီးသွားရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိနေလို့ဖြစ်မယ်...
သိချင် ဖတ်ကြည့်... နဲနဲတော့ ဝါးတယ်...
ယခင်က မီးသွေးကျင်းမိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေရာလေးပါ...
Cable car နဲ့ အပေါ်ပြန်ရောက်တော့ တစ်ခါ Skyway အပြန်အတွက် ထပ်တန်းစီတဲ့နေရာမှာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ သားရေစာမုန့်ဆိုင်လေးတွေ့တာနဲ့ ကျွန်မအစ်မ အမြဲစားချင်တဲ့ သြစီကထွက်တဲ့ Yogurt bar ကို ၁ချောင်း AUD4နဲ့ ၂ချောင်း ၃ချောင်း၀ယ်လာဖြစ်ပါသေးတယ်… (၀ယ်လာတုန်းကတော့ အဲဒါဟာ ကိုယ့်အတွက်နေ့လည်စာဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ မသိခဲ့ဖူးရယ်)... အဲဒိမှာလဲ တန်းစီရတာ ပြည်ကြီးတစ်ရုတ်တွေနဲ့ပဲပေါ့... ဒါပေမဲ့ skyway ကို အလာတုန်းက အေးအေးဆေးဆေးစီးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ စိတ်လဲ မတိုချင်တော့ဘူး... ဒီလိုနဲ့ Scenic world ဘက်ကို ပြန်ရောက်လာတယ်... Hop on Hop off bus စီးဖို့ အချိန်ကြည့်လိုက်တော့ နေ့လည် ၁၂ခွဲနေပြီ... သူတို့ ထမင်းစားနားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ကားမလာလောက်သေးဘူးလေ... အဲဒိအနီးနားတဝိုက်မှာလဲ မဗေဒါတို့ နေ့လည်စာစားဖို့ စားသောက်ဆိုင်မရှိဘူး...ဗိုက်လဲ သိပ်မဆာသေးတာနဲ့ အဲဒိ ဘေးနားမှာ Blue Mountain National Park ဆိုတဲ့ မြေကြီးတောလမ်းလေးတွေ့တာနဲ့ လျှောက်ရအောင်ဆိုပြီး ညီအစ်မ ၂ယောက်သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... အဲဒိတောလမ်းကို လျှောက်ခဲ့တဲ့အတွက် ခုထက်ထိကျေနပ်နေဆဲပါပဲ... ဒါပေမဲ့ အဲဒိတောလမ်းထဲ၀င်ခဲ့တဲ့အတွက် နေ့လည်စာထမင်းငတ်ပြီဆိုတာ သတိမထားခဲ့မိပါဘူး...
Echo Point နှင့် Three sisters ဆီသို့
ဒီတောလမ်း ဒီမှာစတာပဲ... နေ့လည်စာ ငတ်မယ်မသိခင် တပြုံးပြုံးပေါ့... :D
Blue Mountain National Park ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လမ်းလေးဘေးက တောလမ်းလေးမျိုးကမှ မဗေဒါလျှောက်ချင်တဲ့ မြေကြီးလမ်းမျိုးလေးပါ... မြေကြီးပေါ်ကို နင်းလိုက်ရင် မြည်တဲ့ခြေသံကို ကျိုက်ထီးရိုး ငယ်ငယ်ကတည်းက ခြေကျင်တက်နေကျဆိုတော့ တစ်ခုခုကို သတိရသလိုလိုမို့ ကြားရတာ သဘောကျပါတယ်... ဓာတ်ပုံလဲအေးအေးဆေးဆေးရိုက်လို့ရပါတယ်... ဒီလိုတောလမ်းကျတော့ Annoying လူမျိုးများက မလျှောက်ကြဘူး... အဖြူတွေတွေ့တာများတယ်... တစ်နေရာအရောက် ကျွန်မတို့ညီအစ်မ ဓာတ်ပုံတူတူရိုက်ချင်လို့ စတန်းထောင်နေတုန်း တရုတ်သားအမိ ၂ယောက် (အမေနဲ့သား) ရောက်လာပြီး ဘေးမှာလာစောင့်နေလို့ ကျွန်မတို့က သူတို့ကို အရင်ပေးရိုက်လိုက်ပါတယ်... နောက်တော့ သူတို့ ၂ယောက် တူတူရိုက်မယ်ဆို ရိုက်ပေးမယ်လို့ပြောတော့ သူတို့လဲ ၀မ်းသာအားရ (အားမနာလျှာမကျိုး) ကို ရိုက်ခိုင်းတော့တာပဲ... ဒါပေမဲ့ သူတို့က ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ၀င်မလုတာရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောတာရော... အင်္ဂလိပ်လို လိမ့်ပတ်လည်အောင်ပြောတတ်တော့ ပြည်ကြီးတရုတ်တော့ မဟုတ်လောက်ဖူးဆိုပြီး ဘယ်ကလဲ မေးကြည့်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ... သူတို့က ထိုင်၀မ်ကပါတဲ့... တွေ့ဖူးတဲ့သူတချို့ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးကို မ Judge ချင်ပေမဲ့လဲ... တခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ အဲဒိ တွေ့ဖူးသမျှ အများစု ပြည်ကြီးက ဟာတွေနဲ့ စရိုက်က တူကိုမတူတာ...
လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ပြန်လျှောက်လာတဲ့ လူတွေကို နှုတ်ဆက်ရင်း မေးကြည့်တော့... အဆုံးကို ရောက်ဖို့ထက် လမ်းတစ်လျှောက် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တောတောင်သဘာ၀ကို ခံစားသွားတာက ကောင်းပါတယ်တဲ့... ကျွန်မတို့လဲ တကယ်ပဲ အေးအေးဆေးဆေးကို သွားကြတာ... လမ်းလေးက ကျဉ်းပြီး တစ်ခါတစ်လေ ဗွက်အိုင်လေးတွေရှိတာကလွဲလို့ ကျိုက်ထီးရိုးက ရွှေရင်ဆို့စခန်းတို့ဘာတို့ကလို ကျောက်တုံးကြီးတွေကျော်လွှားတက်ရတာမျိုးမရှိပါဘူး... ကျွန်မအစ်မကို ညှပ်ဖိနပ်နဲ့ တောလမ်းလျှောက်လို့ တအံ့တသြဖြစ်တဲ့သူတွေလဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်... :D ... တောလမ်းတစ်လျှောက်ဘာဆိုင်မှ မရှိတာနဲ့ စောစောက ၀ယ်ခဲ့တဲ့ Yogurt bar တွေကိုပဲ အစာပြေစားခဲ့တယ်။ လူက တောတောင်တွေကြည့်နေတာနဲ့ ဗိုက်ဆာတာလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မသိဘူး...
၃ လေးခါလောက် ဒီပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားပြီးမှ ဒီလောက်ရတာပဲ ကျေနပ်လိုက်ပါတယ်... နေကပူ ပြုတ်ကျမှာက ကြောက်ရသေးတယ်...
ဒီလိုနဲ့ တောလမ်းအဆုံးဖြစ်တဲ့3sisters နဲ့ နီးတဲ့ ရှုခင်းသာလိုမျိုးနေရာ Echo Point ကို ရောက်သွားတယ်... ဟိုရောက်တော့မှ သိလိုက်တာက Echo Point ကို Hop On Hop Off bus နဲ့လဲ လာလို့ရတယ်... ကျွန်မတို့က တောလမ်းကို မသိပဲလျှောက်လိုက်တော့ အချိန်တွေတော်တော်ကုန်သွားပင်မဲ့လဲ... ခုလိုလျှောက်ခဲ့ရတာကို ကျေနပ်တယ်... Blue mountain ရဲ့ တောတောင်ရေမြေ အရသာကို ခံစားဖြစ်သွားလို့... Tourist car တွေနဲ့ အဖွဲ့လိုက် အဖွဲ့လိုက်ရောက်လာတဲ့အထဲမှာ ကိုရီးယားတွေများတယ်... ချိုင်းနားတွေလဲရှိတယ်... ချိုင်းနားတွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ annoying တွေပေါ့...(လူထိုင်နေတာသိရက်နဲ့လဲ ဘေးမှာ ကပ်သပ်ပြီး၀င်ထိုင်... သူများထိုင်နေတဲ့ ထိုင်ခုံတန်းဘေးက လွတ်နေတဲ့ပေါ်ကို ဖိနပ်ကြီးတွေနဲ့ နင်းလိုနင်း... ဒီပိုစ့်လဲ ခရီးသွားပိုစ့်ကနေ ချိုင်းနားခရီးသွားများဆိုတဲ့ ပိုစ့်ဖြစ်တော့မယ်... လူမျိုးအားလုံးကို သိမ်းကြုံးပြီး စော်ကား Judge တာမဟုတ်ပါဘူး... ချိုင်းနားသူငယ်ချင်းတွေလဲ ရှိပါတယ်... ဒါပေမဲ့သူတို့လဲ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ စနစ်အောက်မှာကြီးပြင်းလာတော့ အလိုက်မသိတတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေရှိတာကို သုံးသပ်နိုင်အောင်ပြောပြတာပါ)... အဲဒိမှာ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီး ညီအစ်မ ၂ယောက် အချိန်ကိုမေ့နေကြတာပေါ့...
အဲဒိမှာ ရိုက်ပြီး Facebook ပေါ် တင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ ပုံလေးပါ... တောကြီးမျက်မဲထဲတောင် အင်တာနက်လိုင်းက ဓာတ်ပုံတင်လို့ရသေးလို့ ချီးကျူးအားကျမိပါတယ်...
Echo Point မှာ Viewing လုပ်တဲ့ ၀ရံတာလိုနေရာက ၂ထပ်ရှိတော့ အပေါ်တက်သွားတဲ့အခါမှာ3sisters သို့ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းပုတ်ကို ထပ်တွေ့ပါတယ်... ဒီလိုနဲ့ တောလမ်းလျှောက်ရတာ ကြိုက်တဲ့ ကျွန်မတို့ ညီအစ်မ စိတ်တူကိုယ်တူပဲ ဆက်လျှောက်ကြပါတယ်... ဒီလမ်းကတော့ တိုပါတယ်... ဒါပေမဲ့3sisters ကျောက်ဆောင်ကြီးတွေကိုဆင့်တဲ့ Giant Stairway ဆိုတဲ့နေရာကတော့ တော်တော်လေးမတ်ပါတယ်... ဆစ်ဒနီတာဝါပေါ်တက်တုန်းက အသည်းမအေးခဲ့ပေမဲ့ Giant Stairway ကနေ3sisters ကျောက်ဆောင်အစွန်းကိုလှမ်းကြည့်မိရင် အသည်းအေးခနဲဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်... လက်ထဲမှာ ကင်မရာတွေကိုင်ထားတာပါလို့ စိတ်ကလွတ်ကျမှာ စိုးတာလဲ ပါမယ်ထင်ပါတယ်...
ခြေမသန်ရင် မဆင်းတာ အကောင်းဆုံးပဲ...
မတ်စောက်တဲ့ လှေကားထစ်ကြီးတွေပါ... (ကိုယ်တိုင်တော့ ဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး)
ဒါ၀င်က ဦးလေးကြီးပါ...3sisters ကျောက်ဆောင်ကြီးထဲ ရောက်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ....
အဲဒိဘက်မှာတိုက်တဲ့လေက စိမ့်စိမ့်လေးပါ... တောင်ကြားလိုဖြစ်နေလို့လားတော့ မပြောတတ်ပါ... အဲဒိ3sisters ထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ အဖြူ ဦးလေးကြီးက လာသမျှလူနဲ့ စကားတွေပြောနေပါတယ်... ကျွန်မတို့ ညီအစ်မရောက်တော့လဲ သူစကားတွေလာပြောပါတယ်... ကျွန်မတို့ ညီအစ်မကိုတူတူဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်လို့လဲ ပြောပါတယ်... ဒါပေမဲ့ သူရိုက်တာ သိပ်မကောင်းပါဘူး... (ဟီး... ဟီး)... သူက ဒါ၀င်ကလို့ပြောပါတယ်...ခရီးထွက်နေတာ နှစ်ချီနေပြီလို့ပြောပါတယ်... မြန်မာကိုလဲ သိပါတယ်တဲ့... အဲဒိမှာ စင်္ကာပူက မလေး မောင်နှမ ၂ယောက်နဲ့လဲ စုံပါတယ်... သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တော့ သူတို့ကလဲ ကိုယ့်ကို သူတို့ local တွေ့သလို ၀မ်းသာအားရနှုတ်ဆက်သလို... ကိုယ်လဲ စင်္ကာပူမှာ အနေကြာခဲ့ပြီး စလုံးတွေ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အမြင်ကပ်ပေမဲ့ ဟိုမှာတွေ့တော့ စိတ်ထဲ ရင်းနှီးနေသလိုလို ၀မ်းသာအားရ စကားပြောဖြစ်ခဲ့တယ်... တကယ်တော့ စင်္ကာပူဆိုတာ ကျွန်မအတွက် ဒုတိယအိမ်ပဲလေ... (နောက် ၆နှစ် စင်္ကာပူမှာပဲ ဆက်နေဖြစ်မယ်ဆိုရင် မဗေဒါအတွက် မြန်မာပြည်မှာ နေခဲ့တဲ့ ကာလနဲ့ စင်္ကာပူမှာ နေခဲ့တဲ့ ကာလ တူတူဖြစ်ပြီ)...
ကင်မရာခွန် ကောက်မဲ့သူမရှိတော့လဲ အများကြီးလွှတ်ရိုက်လာတာပေါ့....
အဲဒိ ချောက်ဆပ်နားကို ကြည့်ရင် အသဲယားတယ်...
Echo Point ကနေ Laura Cascade ဘက် ဆက်လျှောက်လို့ရသေးတယ်... ဒါပေမဲ့ ထမင်းလဲ မစားရသေးတာကြောင့် ဘတ်စ်ကားနဲ့ပဲ အေးဆေးပတ်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးပြီးပြန်လာဖြစ်တယ်... လမ်းမှာ ဆွစ်ဇလန်က လင်မယားနဲ့ ဓာတ်ပုံအပြန်အလှန်ရိုက်ပေးရင်း ခင်လာတယ်... သူတို့က သြစီဒေါ်လာတွေဈေးတက်နေတဲ့ အချိန်မှာ Euro ဒေါ်လာက ဈေးကျနေတော့ Europe ကို ခရီးသွားသင့်တယ်လို့ပြောတယ်... သြစီကိုလာဖို့ ရွေးခဲ့လို့ အံ့သြနေကြသေးတယ်... Echo Point ကိုပြန်ရောက်တော့ လူတွေသိပ်မရှိတော့ဘူး... နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ညနေ ၅နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီ... ဟိုလင်မယားရော ကျွန်မတို့ရောက ဘတ်စ်ကားစီးဖို့စောင့်နေတာ... ဒါနဲ့ ကျွန်မ မသင်္ကာလို့ bus map ကိုကြည့်လိုက်တော့ နောက်ဆုံးကားက ၄နာရီခွဲတဲ့... အဲဒိလင်မယားကို သေချာအောင် ထပ်သွားမေးကြည့်တော့ သူတို့လဲ ကိုယ့်လိုပဲ ဘတ်စ်လွတ်သွားပြီဆိုတာ ခုမှ သိတော့တယ်... သူတို့ဘယ်လိုပြန်မလဲမေးကြည့်တော့... ခုဆိုရင်တော့ သူတို့ Laura Cascade ကို လမ်းဆက်လျှောက်မယ်... အဲဒိကနေ ရထားစီးမယ်တဲ့... အဲဒိကို လမ်းညွှန်အရက 45 မိနစ် ၁နာရီလောက်လျှောက်ရမှာ... လျှောက်နေရင်း မှောင်သွားမှာလဲ ကြောက်တယ် (ဒါတောင် မဗေဒါက လိုရမယ်ရ ဓာတ်မီးထည့်လာတယ်...) သူတို့ကို နေ့လည်စာစားပြီးပြီလားဆိုတော့... "ဒါပေါ့ ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲ စားပြီးပြီပေါ့" တဲ့... ကျွန်မတို့ ညီအစ်မက မစားရသေးဘူဆိုတော့... "Oh... poor girls" တဲ့... ခုအချိန်ကို သတိထားမိတော့မှ ခေါင်းကမူးသလိုလို ဒူးတွေက တုန်သလိုလိုဖြစ်လာတယ်... ကိုယ်က ညနေ ၃နာရီလောက်ပဲရှိသေးတယ်မှတ်နေတာ... ဒါနဲ့ အဲဒိနားက information ကောင်တာကိုသွားမေးတော့ Blue Mountain ကိုပတ်တဲ့ (Tourist bus မဟုတ်တဲ့) ကားရှိတယ်တဲ့... နောက်ဆုံးကားမှီလောက်သေးတယ်တဲ့... ဒါနဲ့ အဲဒါကို ပဲစောင့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်... ကိုယ်လိုပဲ အဲဒိဘတ်စ်ကိုစောင့်နေတဲ့ ခရီးသွားတွေလဲရှိတယ်... အဲဒိနားက မုန့်ဆိုင်မှာ ဘာများ ဗိုက်၀၀စားလို့ရတာရှိမလဲ သွားရှာဖြစ်သေးတယ်... အာသာပြေနိုင်မဲ့ မုန့်မတွေ့ဘူး... ဆိုင်ကလဲ ပိတ်နေပြီ... စိတ်ထဲမှာ "ခုမှ ဘယ်အချိန်ရှိသေးလို့လဲ.." ဆိုပြီး စလုံး ဆိုင်ပိတ်ချိန်တွေ နဲ့ယှဉ်ပြီး ကွန်ပလိမ်းတက်ချင်နေတယ်...
ဘတ်စ်ကားစောင့်ရင်း ရိုက်ဖြစ်တာ... ရီချင်ယောင်ဆောင်နေတာ...
ရီဖို့ တောင်တော်တော်လေး အားယူခဲ့ရတယ်...
ဘတ်စ်ကားက တော်တော်နဲ့မလာလို့ Katoomba အထိကို လမ်းလျှောက်ပဲပြန်ရင်ကောင်းမလား တွေးမိတယ်... ဗိုက်ကဆာလာတော့ စိတ်ကမရှည်တော့ဘူး...ဘတ်စ်ကားရောက်လာတော့ ညီအစ်မ ၂ယောက် ပိုက်ဆံထည့်စီးပြီး မတ်တပ်နဲ့ Katoomba ပြန်ရောက်လာတယ်... အမြန်ဆုံး စားသောက်ဆိုင်၀င်မှဖြစ်မယ်... တော်ကြာမှ ပိတ်သွားရင် ညစာပါထပ်ငတ်နေမှာ စိုးရတယ်... ဘယ်ဆိုင်သွားမယ်ထင်လဲ... သိတဲ့အတိုင်းပဲ အလာတုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ ယိုးဒယားဆိုင်ကိုပေါ့... ဆိုင်နာမည်က "A-ROON THAI KITCHEN" တဲ့... ဆိုင်ထဲမှာ စားနေတဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မတွေ့လို့ ဆိုင်ပိတ်နေတယ်ထင်ပြီး စိုးရိမ်သွားသေးတယ်... နောက်မှ သူတို့က ခုမှ ဆိုင်စဖွင့်တာဖြစ်နေတယ်... ရောင်းတဲ့သူတွေက ထိုင်းစစ်စစ်တွေပဲ... စားလို့ကောင်းတယ်... ဈေးလဲ သိပ်မကြီးဘူး... ၂ယောက်စားတာ AUD 22 ပဲကျတယ်... ဆိုင်ပြင်ပြန်ထွက်လာတော့ ရာသီဥတုက အေးအေးလေးမို့ ဖြစ်နိုင်ရင် Blue Mountain က ဟော်တယ်မှာ တစ်ညလောက်အိပ်ပြီး သေချာ Explore လုပ်သင့်တယ်... (တကယ်လို့များ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ရောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အဲလိုသေချာပေါက်လုပ်မယ်)...
ဒီလိုနဲ့ Blue Mountain line ကို ပြန်စီးပြီး ဆစ်ဒနီကို ပြန်ခဲ့ကြတယ်... အပြန်ရထားက စီးရတာ ပိုကြာတယ်လို့ ခံစားရတယ်... ရထားပေါ်မှာ ၁ရေးရပြီး ပြန်နိုးတာတောင် အတော်လေးစီးရသေးတယ်... Central station ကိုရောက်တော့ ဟယ်ရီပေါ်တာထဲက ဘူတာရုံကြီးနဲ့တူလို့ လူက စုတ်ပြတ်နေပင်မဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်... အဲဒိနေ့ကဟော်တယ်ပြန်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နောက်နေ့အတွက် ချိန်းဖြစ်တယ်... နောက်နေ့က သောကြာညဆိုတော့ သူတို့ အားပြီလေ... သန္တာကတော့ မနက်ဖြန် အလုပ်ကခွင့်ယူပြီး ကျွန်မတို့နဲ့ လိုက်မယ်တဲ့... ဘယ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့ Darling harbour နားက Sydney Wildlife park နဲ့ Sea Aquarium သွားဖို့ အွန်လိုင်းကနေ ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့၀ယ်လိုက်တယ်... လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံက အဲဒိနေ့မှာ ကုန်သွားပြီ... တစ်ရက်ပဲကျန်တော့လဲ ထပ်မလဲချင်တော့ပြန်ဘူး...
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၃ရဲ့ ချစ်သူများနေ့ကို သြစတေးလျမှာ Pie face က ကုလားနဲ့စကားများတာက စခဲ့ပြီး... Blue Mountain မှာ အချိန်မေ့တဲ့ ခရီးသည်အဖြစ် နေ့ထမင်းငတ်ခဲ့သော်လည်း... အဲဒိနေ့က တွေ့ကြုံခံစား ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအားလုံးကို ကျေနပ်ရင်း ခရီးသွား အတွေ့အကြုံ နဲ့ အမှတ်တရတွေအတွက် ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ အချိန်နဲ့ ပိုက်ဆံကို ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ နောင်တရမှာ မဟုတ်ပါဘူး...
Posted by mabaydar at 6:38 PM 15 comments :
Time for World Heritage Site: Greater Blue Mountai...